Kamerona - Wikipedia
Sarin-tany maneho an' i Kamerona
I Kamerona dia firenena ao Afrika Afovoany, manana morontsiraka ao amin' ny Ranomasimbe Atlantika; voafatritr' i Nizeria avy ao andrefana, i Tsady ao avaratra-atsinanana, ny Repoblikan' i Afrika Afovoany ao atsinanana, ny Repoblikan' i Kôngô sy i Gabôna ary i Ginea Ekoatôrialy ao atsimo, ary ny Ranomasimbe Atlantika ao atsimo-andrefana; manana velaran-tany mirefy 475 440 km2. I Yaounde no renivohiny. Mpikambana ao amin' ny Commonwealth i Kamerona. Mizara io firenena io ho roa ny tangoron-tendrombohitra Adamaoua izay ahitana ny tendrombohitra Cameroun ao atsimo-andrefana izay mahatratra 4 095 m. Betsaka biby dia ny ao Kamerona, ka isan' izany ny antilôpa, ny elefanta, ny gôrily, ny liona sns.
Misy vondrom-poko maro ny ao Kamerona: ny Folany sy ny Kiridy ny ao avaratra, ny vahoaka miteny banto (indrindra ny Bamoleke) ny ao atsimo, ny Pigmea ao amin' ny ala atsimo. Kristiana ny ankamaroan' ny vahoaka kameroney, misy koa ireo manaraka ny fivavahan-drazana afrikana animista sy ny silamo. Ny fiteny frantsay sy anglisy no fiteny ôfisialy ao nefa ahitana fiteny afrikana maro koa ao. Tamin' ny taona 1960 no nahazon' i Kamerona ny fahaleovan-tenany.
Miankina amin' ny fambolena ny toekaren' i Kamerona, ka isan' ny volena any ny kafe, ny kakaô, ny ny akondro, ny landihazo (na hasy).
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Kamerona&oldid=1040797"